Units Kutengesa uye Kubhadhara muUnited States
Chikamu chiyero cheimba chakaenzana nenzvimbo dzekugara dzeimwe imba. Mukutaura kunozivikanwa muAustralia neNew Zealand, izwi rekuti "unit", parinoreva pekugara, rinowanzoreva imba, umo boka rezvivakwa rakavakirwa muchivako chimwe kana kupfuura chakakura-chakavakidzana ('imba inodzivirira'), kana villa unit kana imba yeyuniti, uko kune boka rekugara mune imwechete kana kupfuura imwe zvivakwa zvezvitoro, kazhinji zvinorongwa zvakatenderedza kutenderera. Zvino, yuniti ndeyakazvimiririra-inokodzera yemakamuri, kazhinji ehuremu hwakaderera, ayo anogona kunge akasungirirwa, akaomeswa-kana kubviswa, mukati meboka renzvimbo dzakafanana. Inoshandiswa muAustralia neNew Zealand kuronga kwemadhorobha uye indasitiri yekusimudzira, iri zvakare chinongedzo chekugara. Kamuri imwechete yekamuri inowanzo kunzi studio flat kana beditter, neimwe nzira inozivikanwa seRimwe Rimwe Chiitiko kana SRO kuNorth America. Zvinogona kuoma kuona chaizvo kuti ndedzipi hunhu dzinosiyanisa humwe hwekugara kwakawanda seyunivhesiti kubva kuneyahwo hunotaurwa senge mafurati kana mafirati, asi kushandiswa kwemazuva ese kunoratidza pane chikamu chekirasi kusvika kune icho chiitiko. MuCanada, iyo National Statistical agency, Statistics Canada, inoverengeka huwandu hwenzvimbo dzekugara zvakavanzika munyika pakisheni yega yega, mune iyo nyaya ivo vanozivikanwa se "dzimba dzekugara" uye vanogona kureva zvakaenzana kune imba kana furati. Mumazuva ese eCanada Chirungu "unit" inoshandiswa izwi rekuti amburera kumafurati uye makondomu.